Kalịnda ụbọchị | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Kalịnda ụbọchị
Akụkụ salting kabeeji na kalenda ọnwa
Sauerkraut bara ọgaranya na vitamin, nke nwere mmetụta dị mma n'ahụ tractụrinụ mmadụ. Achịcha ahụ dị mfe ịkwadebe, ma ndị ọkachamara na-ahụ maka ụlọ maara na dị ka kalenda ọnwa na-enwe oge dị mma maka usoro a. Pickles, na-egbute ya n'ụbọchị kwesịrị ekwesị, tọrọ ụtọ na ogologo echekwara.
Kedu mgbe nwere ike salted kabeeji na kalenda ọnwa n'ọnwa January 2019?
Sauerkraut ma ọ bụ pickled kabeeji bụ ndị na-abịakarị na tebụl n'oge oyi, n'ihi na e wezụga na oseose na oseose, ọ nwere ọgwụgwọ Njirimara na bụkwa isi iyi nke ọtụtụ ndị bara uru na ihe oriri na vitamin. N'etiti ndị na-etinyekarị na salting kabeeji, ọtụtụ n'ime ha na kalenda ọnwa, n'ihi na ọ bụrụgodị na ị na-agbaso otu teknụzụ na nhazi, ị nwere ike nweta nsonaazụ dị iche iche.
Peculiarities nke kabeeji gbaa ụka na November dị ka kalenda kalenda
Sauerkraut bụ nri dị mma ma dị ụtọ. Enwetara ihe kasị mma ma ọ bụrụ na ị na-eso kalenda ọnwa. Kedu ụbọchị nke November bụ ihe kacha mma maka akwụkwọ nri nri, gụọ n'okpuru. Kedu ka mma ịme ihe ubi n'ubi kalịnda? Ndị nna nna anyị malitere ịrụ ọrụ mgbe a na-egbute sauerkraut mgbe Ọktoba 14 gasịrị (oriri nke nkedo) dịka usoro nke ọnwa.
Ememme kalenda nke ọnwa na-eri nri na January 2019
Kwadebe ọrụ gị na okooko osisi na Jenụwarị site n'enyemaka nke kalịnda mkpụrụ osisi ị na-eri. Ọ ga-enyere aka ịhọrọ oge maka ịgha mkpụrụ ma ọ bụ ịmalite ịkụ ụlọ. More na nke a na isiokwu. Kedu ka usoro nke ọnwa si emetụta osisi Kalịnda nke ọnwa bụ nkọwa dị mfe nke oge ọnwa na ọnwa. E nwere usoro anọ: ọnwa na-eto eto, ọnwa zuru ezu, ọnwa ọnwa na ọnwa ọhụụ.
Na-agha mkpụrụ maka ịmị mkpụrụ maka ọnwa 2019 maka mpaghara Moscow
Enweghi ike ijide akwukwo ihe omuma site na nka na ihe omuma nke ndi bi na abia. Ọ bụ ya mere ndị na-elekọta ubi ji echebara kalenda ọnwa, nke dabeere na iwu nke okike ma nwee ike igosi ụbọchị kachasị mma ọ bụghị nanị maka ịkụ na ịkụ mkpụrụ osisi dị iche iche, kamakwa maka ịmịgharị na ọbụna ụdị ọrụ dị iche iche na-eme atụmatụ ndị ahụ, bụ nke na-emetụta mmetụta ikpeazụ. .
Agụmakwụkwọ na-edozi ọnwa maka 2019 maka Belarus
Na kalenda nke ọnwa maka onye ọrụ ugbo na onye na-acha ugbo uhie nke Belarus maka 2019 ga-enyere aka ịchọpụta oge dị mma ma dị njọ maka ịgha mkpụrụ. Kedu ihe bụ ụbụrụ ọnwa, yana mmetụta nke satịlaịtị Earth na omenala - gụọ n'okpuru. Kedu ihe mmetụta nke ọnwa na-eto eto na-eto eto? A na-ekwere na usoro ihe omume nke ọnwa na-emetụta uto na mmepe nke ihe ọkụkụ.
Na-agha mkpụrụ maka ịgha mkpụrụ nke ọnwa maka kalenda na November 2019
O doro anya na ọnwa na-emetụta Ụwa. Nlekọta nke elekere anya, nke nwere ike ịzụlite na ịdata ọtụtụ nde mmiri mmiri, na-akpụ mmiri na mmiri, dị nnọọ ka ọ na-emetụta ike ndụ niile dị na mbara ala anyị, gụnyere ahịhịa. Kalịnda ịgha mkpụrụ nke ọnwa na-adabere na ihe a, nke a ga-atụle n'isiokwu ahụ.
Na-eme ka ọnwa kụrụ afọ n'ọnwa December 2019
N'ime ọtụtụ ndị mmadụ, ọbụna ndị nwere ihe jikọrọ ya na ugbo, a na-ejikọta kalenda nke ọnwa ehihie na mbido mmiri na oge okpomọkụ, n'ihi na ọ bụ n'oge a ka okwu nke ịkụ ọrụ (n'ọnọdụ ọ bụla, maka ndị bi n'ebe ugwu ugwu) yiri ka ọ dị mkpa.
Na-eme ka kalenda maka 2019 na Siberia maka onye na-elekọta ubi na onye na-elekọta ubi
Maka ugbo ohia nke ubi na horticultural kuru, ndi oru ugbo na enweta uzo di iche iche, otu n'ime ha bu kalenda nke ehihie. Siberia dị iche na nke etiti, ọ bụghị nanị na ihu igwe, kamakwa n'ụdị dị iche iche nke ọnwa, ya mere, ndị na-agụ kpakpando na-edepụta kalenda iche maka ndị na-elekọta ubi Siberia, ndị na-akụ mkpụrụ osisi na ndị ọrụ ubi.
Na-etinye kalenda maka 2019 maka ndị na-elekọta ubi na gardeners
Ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na-arụ ọrụ na-amị akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi, na-eme ihe ọkụkụ, na-elekwasị anya na ụbọchị ọma nke kalenda ọnwa. Nke a abughi ihe mgbagwoju anya, n'ihi na etiti uwa nke uwa na ihe ndi ozo n'ile uwa di anya. Kedu ka usoro nke ọnwa si emetụta ahịhịa, na mgbe ọ ka mma ịrụ ọrụ ugbo - ọzọ na isiokwu.
Mgbe salting kabeeji na kalenda kalenda na December?
Sauerkraut bụ otu n'ime ihe ụtọ ndị a hụrụ n'anya n'oge oyi. E wezụga na ọ nwere uto dị mma, a na-ewere ya dịka ihe nrịba pụrụ iche nke ascorbic acid, fiber na enzymes. Iji mee ka osisi ahụ sie ike na ihe na-atọ ụtọ, ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ ụlọ na-agbazi ngwaahịa ahụ n'ụbọchị ụfọdụ nke kalenda ọnwa.
Ndị mmadụ maara ogologo oge banyere mmetụta nke ọnwa na ndụ niile bi na mbara ala anyị, mgbe ọ na-eme atụmatụ ọrụ ha, ọ bụghị ihe ijuanya na ndị nna nna anyị na-arụ ọrụ n'ubi ugbo gbalịrị ilekwasị anya ọ bụghị nanị na ọnọdụ ihu igwe, kamakwa na usoro nke "obere kpakpando" ahụ. N'enyeghị oke, kalenda kụrụ afọ maka ịgha mkpụrụ na-abaghị uru n'oge oge mmepe nke nkà na ụzụ ọhụrụ na nchọpụta sayensị.